ANA က Inspiration ရေကန်ဤနေရာသို့သွားရန်ဓါတ်ပုံများ: အရေကန်၏ Ladies
အဆိုပါ LPGA ANA က Inspiration မှာချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားပြုလုပ်ခြင်းဂေါက်သီး
ဘိန်းရဲ့ရေကန်ထဲသို့ခုန် နောက်တစ်နေ့မှာဒိန Shore သင်တန်း၏ 18 အစိမ်းရောင်မှ မစ်ရှင်တောင်ကုန်း Country Club ၏ဆုရှင်တစ်ဦးအစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ် LPGA ANA က Inspiration ပြိုင်ပွဲ (ယခင်က Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်အဖြစ်လူသိများ) ။ ပထမဦးဆုံးထိုကဲ့သို့သောခုန်ခြောက်နှစ်အစောပိုင်းကရာအရပျကိုယူပေမယ့်အဆိုပါပြိုင်ပွဲဆုရ, 1994 ကတည်းကနှစ်တိုင်းဒီ "ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှား" ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။
စုပေါင်းခြင်း, ANA က Inspiration အနိုင်ရပြီးနောက်ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားစေပြီသူဂေါက်သီးသည့်အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည် "ဟုအဆိုပါရေကန်၏ Ladies ။ " ဒီပြခန်းထဲမှာအောင်ပွဲ clinching ပြီးနောက်၎င်းတို့၏အရာလုပ်နေတာက "ထိုရေကန်၏ Ladies" ၏အများဆုံးဓါတ်ပုံများဖြစ်ကြသည်။
Patti Sheehan ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှား, 1996
Patti Sheehan 1996 အော့တို Greule ဂျူနီယာ / Getty Images အတွက်ရေထဲသို့သူမ၏လမ်း cartwheeled
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြခန်းအတွင်းပထမဆုံးပုံဒိန Shore သင်တန်းအမှတ်စဥ်အပေါ် 18 အစိမ်းရောင်ကပ်လျက်ကိုလည်း၏ (သို့မဟုတ်သို့ခုန်၏လုပ်ငန်းစဉ်၌) ရေထဲမှာတစ်ဦးဂေါက်သီးပုံဖော်မထားဘူးသောတစ်ဦးတည်းသာဘိန်းရဲ့ရေကန် (စချန်ပီယံလိဂ်ရေကန်အဖြစ်လူသိများ) ဖြစ်ပါသည် ချို Mirage, ကာလီဖိုးနီးယားအတွက်မစ်ရှင်တောင်တန်းများမှ Country Club မှာ။ သင်တို့မူကား, ဤပုံရိပ်ရွေးချယ်ရာတွင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တင်နိုင်ပါတယ် Patti Sheehan မဟုတ်ဘဲရေ၌သူမ၏တစ်ဦးထက်? 1996 Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်မှာသူမ၏အနိုင်ရပြီးနောက် Sheehan ရေထဲသို့သူမ၏လမ်း cartwheeled ။
Betsy ဘုရင်, 1997
Craig ဂျုံးစ် / Getty Images
"Leap" propably အဘို့အညာဘက်ကိုစကားလုံးမဟုတျပါဘူး Betsy ဘုရင်က 1997 မှာဘုရငျတှငျ 's ကို dunking ရေထဲသို့ပြေးလေ၏။ ဒါဟာနှစ်နှစ်အတွင်း LPGA Tour အပေါ် King ရဲ့ပထမဦးဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့, ဒါကြောင့်သူမပြော့ရေထဲသို့နစ်မြုပ်အဖြစ်သူမဖြစ်ကောင်းကယ်ဆယ်ရေးစခန်း၏အတော်လေးနည်းနည်းခံစားခဲ့သည်။
Dottie ငရုတ်ကောင်း, 1999
Dottie ငရုတ်ကောင်း သူမ၏ဂေါက်သီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ဘာမှတစ်ဝက်မြန်နှုန်းလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှနှင့်သူမ၏ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားကာ exuberant တစျခုဖွစျသညျ။ ငရုတ်ကောင်းခြောက်လလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့နှင့်သူမ၏ 19-အောက်မှာ-တန်းတူရမှတ်တစ်ခု LPGA အဓိကအတွက်တန်းတူ ဆက်စပ်. အတွက်အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပြီး, မည်သည့်အဓိက, ကယောက်ျားရဲ့သို့မဟုတ်အမျိုးသမီး (သာက Tiger Woods ကလိုက်ဖက်ထားပါတယ်) တွင်အကောင်းဆုံး-သည်အစဉ်အမြဲချည်ထားလေ၏။
Karrie ဝက်ဘ်, 2000
တွမ် Hauck / Getty Images
အဆိုပါ 2000 Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်၏ဒုတိယအဓိကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည် Karrie ဝက်ဘ်က '' s ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် Karrie ကိုမဆိုအကျဉ်းသားယူခဲ့ပါဘူး: သူမသည်ဝိုင်ယာကြိုး-to-ဝါယာကြိုးဖြင့်အနိုင်ရခဲ့သည်နှင့် 10 လေဖြတ်လာမည့်ပြေးသမား-Up ၏ပြီးဆုံး။ ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အောင်ပွဲ၏အကြီးဆုံး margin ပါပဲ။
ဓာတ်ပုံများတွင်ဝက်ဘ်ကင်မရာမှသူမ၏ကျောရှိပါတယ်။ ဝက်ဘ်ကပွေ့ဖက်ထိုမိန်းမသည်အချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝက်ဘ်နှင့်အတူရေထဲသို့ဝင်သဖြင့်သူကိုအဆိုတော် Celine Dion ဖြစ်ပါသည်။
Annika Sorenstam ဟာနောက်ဆုံးမှာ 2001 အတွက် Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်အတွက်သုံးခေါင်းစဉ်ပါလိမ့်မယ်အရာကိုပထမဦးဆုံးထိုမိနျးမမအရာအားလုံးကိုတူသောအနိုင်ရပါက Sorenstam အဆိုပါချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားစေဘို့အချိန်အခါသူမကခေါင်းကို-ပထမဦးဆုံးအတွက်ချိုးငှက်။
စတီဖင် Dunn / Getty Images
သူမ၏ 2002 အောင်ပွဲရအပြီးတွင် Annika Sorenstam အဆိုပါချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားဖို့ gentler ချဉ်းကပ်ကိုယူ။ သူမသည်နည်းနည်း Reilly ၏လက်ကိုကိုင်ပြီး, ရေကန်ထဲသို့သူမ၏ caddy ၏နုပျိုသမီး, တယ်ရီ McNamara လိုက်ပို့။ (ဒါကနောက်ခံ, Charlotta Sorenstam, Annika ရဲ့အစ်မရဲ့။ )
ပက်ထရီရှာ Meunier-Lebouc, 2003
ရောဘတ် Laberge / Getty Images
ကျနော်တို့ပက်ထရီရှာ Meunier-Lebouc အဆိုပါချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှား၏အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့မိလျှင်, သို့မဟုတ်သူမပင်အားလုံးမှာရေထဲသို့မသွားချင်ခဲ့တယ်ရှိမရှိသေချာမသိပါပဲ။ သို့သော် golly အသုံးပြုပုံသူမရေထဲသို့သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ၏ခင်ပွန်းကသေချာစေခဲ့သည်။ ခင်ပွန်း Antoine Lebouc Meunier-Lebouc ရဲ့ခုန် caddy နေဖြင့်ရှေ့ပြေးအထက်ပါဓာတ်ပုံများတွင်ရေကန်သို့ပက်ထရီရှာသယ်ဆောင်။
Lisa ကို Blumenfeld / Getty Images
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းပန်းခြံ , စုံတွဲတစ်တွဲရာသီအတွက်အကောင်းဆုံးကစားသမား-မပါဘဲ-a-အဓိကဖြစ်အမြဲပွိုပေမယ့်အနိုင်ရဘို့အမှတဆင့်ကိုချိုးဖျက်နိုင်ခြင်းခဲ့သည်။ 2004 ခုနှစ်တွင်သူမနောက်ဆုံးအပေါက်ပေါ်တွင်အောင်ပွဲထွက်ဆွဲမတိုင်မီ 17 နှစ်အရွယ် Aree သီချင်းနှင့်အတူတစ်ဦးသောဝိညာဉ်တော်ဗိုလ်လုပွဲနေ့တိုကျပှဲတှငျစေ့စပ်။ ထိုအခါရေထဲသို့သူမစီးဘို့တစ်လျှောက် High-ပျံသန်း caddy နှင့်အတူသွားလေ၏။
အဆိုပါ Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်မှာ 2005 ခုနှစ်အနိုင်ရဒီပြိုင်ပွဲအတွက် Annika ရဲ့သုံးခုကိုအနိုင်ပေး၏နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူမသည်ရှစ်လေဖြတ်ခြင်းဖြင့်အနိုင်ရခဲ့, ထိုသို့ Sorenstam ရဲ့ပဉ္စမဆက်တိုက် LPGA အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အိုင်များတွင်သူမ၏အောင်ပွဲခံခုန်ဘို့, သူခုန်ဘို့တလျှောက်တွင်သူမ၏အစ်မ Charlotta (လက်ဝဲ) ကိုယူ။
Karrie ဝက်ဘ်, 2006
ဂျက်ဖ်စုစုပေါင်း / Getty Images
အဆိုပါ 2006 Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်ဟာများသောအားဖြင့်စောင့်နေဖြင့် exuberant နှစ်ခုပြသမှုများအတွက်အောကျမေ့နေသည် Karrie ဝက်ဘ် ။ သူမသည်ပြိုင်ပွဲများ၏ 72nd တွင်းပေါ်မှာရွှေလင်းတအဘို့အထွက် holed နှင့်သူမ၏ caddy ရဲ့လက်နက်သို့ခုန်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးအဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ သူမသည် Lorena Ochoa ကျော်တစ်ဦး PLAYOFF အတွက်အနိုင်ရတဲ့အထိအနာနှင့် caddy က Mike Paterson နှင့်အတူသူမ၏လုံ့လရှိသူချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားအပေါ်အတော်လေးကြီးမားတဲ့မျိုးစုံတို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ဒါဟာရေကန်၏ Ladies မဆိုအားဖြင့်အောင်မြင်အချိန်ဆွဲထားကိုအကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
မော်ဂန် Pressel, 2007
ဒါဝိဒ်သည် Cannon / Getty Images
2007 သူမရဲ့ caddy နှင့်အဖွားအတွက်သူမ၏ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားလည်းသူမ၏နှင့်အတူရေထဲသို့ဝင်သဖြင့်ပြီးနောက်မော်ဂန် Pressel တစ်ဦးဂန္ pose ရိုက်။ Pressel ရဲ့အောင်ပွဲသူမ၏အသက်အရွယ် 18 နှစ်, 10 လနှင့်9ရက်အတွင်းမှာအငယ်ဆုံး-အစဉ်အဆက်ကိုအဓိကချန်ပီယံဆုရှင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Lorena Ochoa သူမ၏မိသားစုနှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများမှနက်ရှိုင်းစွာကျူးလွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူမရဲ့ 2008 ခုနှစ်အောင်ပွဲပြီးနောက်သူမ၏နှင့်အတူဘိန်းရဲ့ရေကန်များ၏ရေထဲသို့သူတို့ထဲကတစ်ဦးအလုံးအရင်းကို ယူ. ကျူးလွန်။ Ochoa ရဲ့အခမ်းအနားကိုရေ၌အရှိဆုံးအချိန်သုံးစွဲခဲ့သူချန်ပီယံအဘို့အ, လွန်း, အကယ်စင်စစ် recordholder ဖြစ်ပါတယ်။ Ochoa ကျောကုန်းနှင့်ဖလားတင်ဆက်မှုမှဦးတည်ရှေ့တော်၌ခဏပတ်ပတ်လည်ဖြန်းလေ၏။
2009 KNC အောက်ပါ Brittany Lincicome ရဲ့ခုန်အောင်ခြင်းအဘို့, ဒါပေမယ့်လည်းကအောင်ပွဲရဖို့ ယူ. အချိန်မပေးရုံဝမ်းမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ 2005-07 ကနေသူမရဲ့ငယ်ရွယ် LPGA အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖို့အကြီးအက start ပြီးနောက် Lincicome လွှဲအပြောင်းအလဲကာလအတွင်းညံ့ဖျင်းကစားနီးပါးနှစ်နှစ်သွားပြီခဲ့သည်။ သူမသည် Kraft Nabisco မှာအနိုင်ရသောအခါမူကား, ကသူမရဲ့ပထမဦးဆုံးအဓိကချန်ပီယံနှင့်တတိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအနိုင်ရမှတ်သား။ သူမ၏နှင့်အတူခုန်သူမ၏ဖခင်နှင့်သူမ၏ caddy (လက်ဝဲ), Tara Bateman ခဲ့ကြသည်။
Yani Tseng ဘိန်းရဲ့ရေကန်သို့ 's ခုန်ဒါနုပျိုဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, 2010 Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်မှာ Tseng ရဲ့အောင်ပွဲတစ်ခု LPGA အဓိကသူမ၏ဒုတိယမြောက်အနိုင်ရရှိခဲ့သျောလညျး 21. ၏အသက်အရွယ်မှာရောက်လာတယ်။ သူမသာ 19 နှစ်အရွယ်မှာသူမဟာ 2008 LPGA ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Stacy Lewis က 2011 ခုနှစ်,
Stacy Lewis က အထက်ပါပုံတွင်ဒုတိယလက်ဝဲကနေဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏ဘယ်ဖက်မှသူမ၏ caddy, Travis Wilson ကဖြစ်၏ နှင့် Lewis က '' ညာဘက်ထံမှသူမ၏ညီမ Janet, မိခင်က Carol နှင့်ဖခင် Dale ဖြစ်ကြသည်။
Lewis ကအထင်ကြီးဖက်ရှင်အတွက် 2011 ခုနှစ် Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်နှစ်ခုလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ချန်ပီယံကမ္ဘာ့နံပါတ် 1 Yani Tseng ခုခံကပ်တွယ်မှုကိုနောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော် Lewis ကသုံးခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူရန် Tseng ရဲ့ 74 မှ 69 carded ။
ဒါဟာမသာ Lewis က '' ပထမဦးဆုံးအဓိကချန်ပီယံအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့်သူမရဲ့ပထမဦးဆုံး LPGA Tour အောင်ပွဲ။
ကံမကောင်းစွာပဲ Lewis က '' မိခင်ဘဏ်မှ awkwardly နီးကပ်လေယာဉ်ဆင်းသက်သည်ခုန်တခုတခုအပေါ်မှာဒဏ်ရာခံစားခဲ့ရသည်။ သူမသည်တစ်ဦးလူနာတင်ယာဉ်အတွက်ကြောင့်ကာရို Lewis ကကျိုး fibula ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ရှိရာဒေသခံတစ်ဦးဆေးရုံမှသင်တန်းကနေခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
Sun ကလူငယ် Yoo, 2012
Sun ကလူငယ် Yoo 2012 Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရပြီးနောက်သူမ၏ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားဘို့ရိုးရှင်းသောထားပေးသည်။ သူမ၏ caddy ဘိန်းရဲ့ရေကန်သို့မိမိအခုန်သို့အနည်းငယ်ပိုတီထွင်ဖန်တီးမှုထားတော်မူ၏။
Yoo ရဲ့ခုန်တစ်ခုမဖြစ်နိုင်တစျခုဖွစျသညျ။ သုံးဆယ်မိနစ်အစောပိုင်းကပြုလုပ် Yoo Ik ကင်မှအပြေးသမား-Up အပြီးသတ်သွားခဲ့ပါသည်သလိုပဲ။ ထိုအခါမူကား, Kim ကနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဟာ 72nd အစိမ်းရောင်ပေါ်တွင် 1-ခြေလျင်ကျင်းစိမ်ရိုက်ချက်လွဲချော်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး PLAYOFF သို့ Yoo နှင့်ကင်မ်စေလွှတ်လျက်, Yoo ပထမဦးဆုံးအပိုအပေါက်ပေါ်တွင်ကောင်းတဲ့ birdie အတူကအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Inbee ပန်းခြံ, 2013
သူမနှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်ဘိန်းရဲ့ရေကန်ထဲသို့ခုန်လုပ်ပြီးနောက် Inbee ပန်းခြံ, 2013 Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်၏ဆုရှင်, ရေထဲကတက်လာပါတယ်။ တကယ့်ကြောင်းနီးစပ်မဟုတ်ခဲ့ပေမယ့်ပန်းခြံလေးလေဖြတ်ခြင်းအားဖြင့် 2013 ခုနှစ် KNC အနိုင်ရ: သူမသည်အမှန်တကယ်စိန်ခေါ်ခံနေရဘယ်တော့မှ, နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်ကြီးစိုး။
ပန်းခြံလည်းသူနှင့်အတူအိုင်ထဲသို့စုံတွဲတစ်တွဲကိုရေပုလင်းကိုယူဖို့အမြော်အမြင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ယခုအချိန်တွင်တစ် keepsake အဖြစ်, ဘိန်းရဲ့ရေကန်မှရေနှင့်အတူသူတို့ကိုပြည့်စေတော်မူ၏။
ဒါဟာ 2008 ခုနှစ်ကအမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏ Open ပြီးနောက်, Park ရဲ့ဒုတိယအဓိကချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့သည်။
Lexi Thompson က 2014 ခုနှစ်,
Lexi Thompson က သူမသည် 2014 ခုနှစ် Kraft Nabisco ချန်ပီယံရှစ်အနိုင်ရအပြီးဘိန်းရဲ့ရေကန်ထဲသို့ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားလုပ်သည့်အခါရသေးအသက် 20 မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူမသည်အပြေးသမား-up, Michelle Wie ကျော်သုံးလေဖြတ်ခြင်းဖြင့်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရနှင့်ကစား၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကိုအများဆုံးတစ်လျှောက်လုံးအစိုင်အခဲကိုထိန်းချုပ်ခဲ့သည်။
အကွိမျမြားစှာသောလူသူမ၏မိဘများအပါအဝင် Thompson ကနှင့်အတူရေထဲသို့ခုန်ချ။ အထက်ပါဓာတ်ပုံ, Thompson က caddy Benji Thompson ကနှင့်အတူအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။
ANA ကအဘို့အ Kent C. Horner / Getty Images
2015 ခုနှစ်တွင် - ပထမနှစ်တွင်ပြိုင်ပွဲနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အောက်တွင်ကစားခဲ့သည် ANA က Inspiration - Brittany Lincicome ဒုတိယအကြိမ်များအတွက်ချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားစေပါတယ်။ သူမကို 2009 ခုနှစ်တွင်အနိုင်ရရှိသည့်အခါသူမနောက်ဆုံးအပေါက်ပေါ်ရွှေလင်းတအောင်နေဖြင့်ဤမျှကိုပြု၏။ ဤအချိန်သူမကိုလည်း 72nd ပေါက် eagled နှင့်တစ်ဦး PLAYOFF သို့သူမ၏တယ်။ အဆိုပါ PLAYOFF မှာတော့သူမကတတိယအပိုအပေါက်ပေါ် Stacy Lewis ကရိုက်တယ်။
2015 ခုနှစ်တွင် Lincicome နှင့်အတူခုန်ပြုလုပ်ခြင်းသူမ၏ caddy နှင့်သူမ၏ဖခင် (ညာ), ပေါင်းသူမ၏စေ့စပ်, ရှည်လျား drive ကိုပြိုင်ဘက် Dewald Gouws ခဲ့ကြသည်။
လုဒိ Ko, 2016
လုဒိ Ko ဟာ 2016 ANA က Inspiration ၏နောက်ဆုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဦးဆောင်ဘယ်တော့မှ ... သူမနောက်ဆုံးအပေါက် birdied အထိပါပဲ။ ဒါကသူမအတွက် 1-လေဖြတ်အောင်ပွဲ ပေး. တစ်ခုအံ့သြဖွယ်နုပျိုဂေါက်သီး၏အံ့သြဖွယ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဆက်ပြောသည်။
ဒါဟာတစ်ဦး LPGA အဓိက Ko ရဲ့ဒုတိယအနိုင်ရရှိခဲ့သည်, သူမရှိသေးပါပင် 19 နှစ်သမီးအရွယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ တကယ်တော့ဦးဖြစ်သူကိုယင်းပေါ်မှာဤအောင်ပွဲအမှတ်3ဖန်ဆင်းသောသူမ၏ 19 နှစ်မြောက်မွေးနေ့၏ရှက်သုံးပတ်ခဲ့ အငယ်ဆုံး LPGA အဓိကဆုရရှိသူစာရင်း ။ ဤသည်အောင်ပွဲကိုလည်းများ၏စာရင်းပေါ်သို့တတ် ခြုံငုံအငယ်ဆုံး LPGA ဆုရရှိသူ , Ko ကလွှမ်းမိုးနေတဲ့စံချိန်အမျိုးအစား။
So Yeon Ryu, 2017
So Yeon Ryu Lexi Thompson ကပါဝင်သောတစ်ခုကံဆိုးပြစ်ဒဏ်အခွအေနေပြီးနောက် 2017 ANA က Inspiration အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ တတိယပတ်ပတ်လည်မှာတော့ Thompson ကမှားကွက်ထဲမှာအစိမ်းရောင်ပေါ်မှာဘောလုံးကိုအစားထိုး။ ဘယ်သူမှကြောင့်ဖမ်းမိ, အောက်ပါနေ့ရက်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုသူသည်အထိသျောအဆိုပါချိုးဖောက်မှုသတိပြုမိသည်။ ဒါကကြည့်ရှုသူပြိုင်ပွဲတာဝန်ရှိသူများကသတိပေးနှင့် Thompson က - နောက်ဆုံးနေ့၌ပြိုင်ပွဲများ၏ထိန်းချုပ်မှု၌ထငျရှားသူမြား - Round3ကိုကာလအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းတစ်ခုခုက Round4မှာလေးလေဖြတ်အပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်။
Thompson ကတစ်မကောင်းဘူးလို့ချိုး, ဒါပေမယ့်လယ်ပြင်၌အခြားအဂေါက်သီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်။ ထိုအ Ryu အားသာချက်ကိုယူ။ သူမသည်ပထမဦးဆုံး PLAYOFF တွင်းပေါ်မှာ Thompson ကရှုံးနိမ့်ဖြစ်လျှင်, 72nd ပေါက်အပေါ်တစ်ဦး birdie အပါအဝင် 68 ပစ်သတ်။
Pernilla Lindberg, 2018
သူမ၏အမေနှင့်အဖေအားဖြင့် flanked Pernilla Lindberg, 2018. အတွက်ရှစ်ပေါက်, ရုတ်တရက်သေခြင်း PLAYOFF (သူမ၏ caddy နှင့်အနာဂတ်ခင်ပွန်းဒံယလေသတေလာခေါင်းကို-ပထမဦးဆုံးအတွက်တဦးတည်းရေငုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ) ကျန်ရစ်သူပြီးနောက်ခုန်လုပ်
Lindberg, Inbee Park နှင့်ဂျနီဖာသီချင်း PLAYOFF ရှိကြ၏, ဒါပေမယ့်သီချင်းတတိယအပေါက်ပေါ်ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။ Lindberg နဲ့ Park, သို့သော်, ပဲ ... သွားစောင့်ရှောက်မယ့်။ Lindberg ထိုချန်ပီယံရဲ့ခုန်ပျံကျော်လွှားစေညာဘက်ပေမယ့်လည်းမဆိုမျိုးသူမ၏ပထမဦးဆုံး LPGA Tour အောင်ပွဲမသာအနိုင်ရမှီကရှစ်တွင်းကိုယူ။
အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား: ဥရောပ vs. ယူအက်စ်အေ
2016 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: ဂျွန်ဆင်ဒါကပထမဦးစွာဗိုလ်မှူးဝင်းလာ
NCAA Men ရဲ့ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲရေးအဖွဲ့ Winners
Curtis ဖလား: အမေရိကန်နိုင်ငံ-GB အထိ & ငါအသင်းများအကြားနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ
2017 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Justin သောမတ်စ် '' ပထမဦးစွာဗိုလ်မှူးဝင်း
1944 PGA Championship ပြိုင်ပွဲ: Hamilton ကနောက်ဆုံးထဲမှာနယ်လ်ဆင်ကထိပ်ဆုံးမှာရပ်တည်
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်မညျးတျောကို-သားတော်ကို Winners
1937 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား: အဆိုပါပထမဦးစွာလမ်းမကြီးဝင်း (သို့မဟုတ်နေအိမ်ဆုံးရှုံးမှု)
အရောင် accents နှင့်ပေါင်းစပ် - အိမ်ရှင်ဆုံးဖြတ်ချက်များ
စားပွဲတင်တင်းနစ် - Long ကဝက်ခြံနှင့်အတူကစားခြင်းများအတွက်ခေတ်သစ် Defender Tactics
1972 အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Nicklaus Pebble သဲသောင်ပြင်မှာဆွတ်ခူး
အဆိုပါ Rumba ကခုန်
ယောဘသည်ဖိုင်း - လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်မန်နေဂျာများ
အဆိုပါ 40 ၏နိစ္စထာဝရမေတ္တာကိုသီချင်းများ
အဆိုပါတြိဂံ Shirtwaist Factory မီးဘေး
ကျောက်ဖြူခွက်၏ဝိညာဉျရေးရာနှင့်ကုသမှု Properties ကို
အခမဲ့အွန်လိုင်း TOEFL လေ့လာမှုလမ်းညွှန်များ
မေမေ7ဂရိတ်လက်ဆောင်များ
အဆိုပါမူရင်း 13 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်
"ကြွက် Boob" အတွက် Disneyland မှစ. ပိတ်ပင်ခံရတဲ့အမေနဲ့သမီးရှိသနည်း
ရောဘတ် Venturi နှင့် Denise ဖြစ်သူ Scott Brown က၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
လီယိုတော်စတွိုင်းရဲ့ဂန္ထဝင် '' အန္န Karenina '' မှစ. quotes
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: အဆိုပါ Liberty သင်္ဘောအစီအစဉ်
အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါတွေကရေငုပ် reflex နှင့် Freediving (အသက်ရှူကျပ်)
သင်သိပါရန်လိုအပ် 100 စပိန်စကားသင်ယူပါ
Pluto: ပထမ Reconnaissance သင်ပေးခဲ့အဘယျသို့